BiblioCAD, download Autocad iyo qorshooyinka - Geofumadas
Juunyo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Downloads, Engineering
BiblioCAD waa goobta oo ku jira qadar qiimo leh oo faylasha diyaar u ah soo dejinta. Waxaad si fudud u xallin kartaa marka aad samaynayso mashruuc ama aad nala siinayso fikrado cusub sidii loo horumarin lahaa. Aynu aragnay kiisaska qaarkood:
Waxaan qabsanaynaa faahfaahin ku saabsan xayawaanka rabadhka ah ee xargaha, oo leh aragtida isometric, gooye iyo dhirta.
Waxaan ubaahan nahay kooxo, geedo ama dhir
Mashruuc dhamaystiran oo dhismayaal badan leh, oo nagu dhiirrigelinaya
Wareegyo isdabajoog ah oo lagu qaabeeyey cabbirka 3
Marka la soo koobo, kuwani waa tusaalayaal, oo aad halkan ku aragto waxaan ka tagayaa tijaabada:
Yaan dooneynin duub diyaaradda ee dhismahan dhismaha ee dhererka, oo aan ka mid ahayn oo kaliya diyaaradaha geedka laakiin jarista iyo aragtiyaha.
Eeg mashruuca naqshadeynta magaalada. Inkasta oo horumarintu ka socoto Colombia, waxay noqon kartaa mid waxtar leh in la qiyaaso sida aan u rabno alaabtayada inaan eegno markaad shaqaynayso Qorshaha Qorshaynta Xuduudaha.
Waxaa jira faylasha qaababka vector sida dwg, max, 3Ds, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah PDF iyo qaabab kale.
Xaaladda faahfaahinta wax-soo-saarka waa mid la taaban karo, maaddaama kuwaani badanaa u baahneyn qiyaasta khasabka ah iyo iyadoo la cusbooneysiinayo labo isbedel. Tusaale ahaan waxaan tusayaa ... wakhtiga badbaadinta waa mid cajiib leh.
Dhab ahaantii, ugu fiicnaanta BiblioCAD waa qadarka waxyaabaha la wadaago. Ma aha qalad ah in la soo dajiyo faylasha ku filan si ay ugu hayn karaan bakhaaradeena; si dhakhso ah ama ka dib waxaan ubaahan karnaa. Sidoo kale sababtoo ah boggaani badanaa waa la seexanayaa habeenkii oo naga tagaa annaga oo ka qoomameynaya inaanan ka faa'iideysan.
Waxaan jecelahay nalka bogga, labadaba raadinta ereyga muhiimka ah iyo agaasimaha qaybta lagu dalbay. Marka la doorto, waxaad dooran kartaa qaybaha hoose; Tusaalaha labaad ee aan muujinayo waa Urban Design, laakiin qaybaha halkan waa wadamada; aad u macquul ah Sidoo kale, haddii aan raadinay geedaha iyo dhirta, qaybaha hoose waxay noqon doonaan 2D, 3D, iwm.
Dhammaan Soo deji qorshayaasha ee BiblioCAD ayaa loo kala soocayaa sidan, waxaan uga tagayaa qayb ka mid ah liiska qaybaha si aan u aragno qadarka content ee halkaa ka jira:
Qalabka magaalooyinka (445)
Shirkadaha dhismaha (297)
Dheecaan ka sameysan (5)
Beeraha iyo inst. Beerashada (188)
Beeraha iyo beeraha (686)
Geedaha iyo dhirta (1,001)
Barkadaha iyo barkadaha dabbaasha (221)
Isboortiga iyo Madaddaalada (699)
Faahfaahinta dhismaha (2,523)
Sawir la 'AutoCAD (217)
Qalabka Alaabada (917)
Gaadiidka gaadiidka (1,685)
Qalabka iyo qalabka (4,583)
Nidaamyada dhismaha (394)
Nalalka Korantada (319)
Heerarka dhismaha (255)
Waxyaalaha muuqaalka ah (186)
Waxyaabaha kale (213)
BiblioCAD maahan meel loogu talagalay waxyaabaha kale ee dadku ku soo bandhigaan oo muujiyaan iyaga asaga oo ah, mana loo ogol yahay inay soo rogaan waxyaabo aan ahayn iyaga. Inta badan waa meel bannaan oo lagu iibiyo Noocyada AutoCADSi kastaba ha noqotee, waa ku habboon tahay in la aqoonsado qiimaha dheeraadka ah ee lagu bixiyo bulshada iyada oo la bixinayo kheyraadka sida kan uu bixiyay boggan. Dabcan, waxbaa xor u ah noloshaan, haysashada shabakadda internetka kharashka, sidaa daraadeed si loo soo daabaco faylasha aan ka ahayn qaybta BILAASHADA waa lagama maarmaan in la wadaago faylashaada, taas oo na siinaysa dhibco si aan u helno download.
Waxaa sidoo kale jira qorshe lacag-bixin bille ah, oo ka bilaabma $ 20 bishiiba ama $ 2.77 bishiiba haddii aad bixiso sadex sano oo qandaraas ah $ 100.
Post Previous«Previous Geomap Geobide Beta 3, waxay u muuqataa mid rajo leh
Post Next Sitchmaps / Mapper Global, u rogaan sawirrada si ecw ama kmzNext »
15 Jawaab in "BiblioCAD, download AutoCAD blocks iyo sawirada"
Krishna isagu wuxuu leeyahay:
faahfaahin cajiib ah oo ku saabsan qaybaha autocad.
Qorshaha Guriga Autocad Sawir qaadashada
Juan max isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaad iigu sheegto sida iyo meesha aan ka soo dejisan karo xarumaha nadaafadda sanadka ee Autocad 2010
arq.com.mx iyaga ka heli
VICTOR SALGADO isagu wuxuu leeyahay:
si fiican ayaan rabaa in aan soo dejiyo qorshooyin i siiya khibrad fiican.
Willy Rocha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira qorshayaal aad u wanaagsan oo laga faa'ideysto. Ka sokow taasi waa qalab aad u faa'iido badan. mahadsanid …… ..
Waxay noqon kartaa inaan lagu furi karin nooca aad isticmaaleysid. Waa inaad ku badashaa adoo adeegsanaya AutoDesk True Converter, waa lacag la’aan waxaadna kala soo degtaa bogga Autodesk.
Soo dejisashada CAD aniga furi meyso Waxaan leeyahay 2006 mise waa inaad kaliya aragtaa sawirka? Qof baa igu dheh fadlan
freddy correa isagu wuxuu leeyahay:
Waan jeclaan lahaa haddii aad iigu sheegayso halka aan ka soo dejisan karo autocad xero 3d Waxaan u baahanahay inaan dhamaysto shaqada
RAMON AYALA BLANCAS isagu wuxuu leeyahay:
haddii aan jeclaan lahaa in aan soo dejiyo qorshooyin ah in aan qaato fikrado qaar oo aan ka qayb qaato qorshahayga loogu talagalay dadka kale ee sameeya sidan oo kale, waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin fikrado wanaagsan oo qofna u adeegi karo
JOEL VILLALOBOS isagu wuxuu leeyahay:
kaliya xayeysiisyada xorta ah
ERIKA YAZMIN VILLANUEVA TELLEZ isagu wuxuu leeyahay:
irid ah isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaan qorshayaashu waa kuwo aad u fiican